भान्साको लागि कस्तो तेल उपयुक्त ?:: Naya Nepal
भान्साको लागि कस्तो तेल उपयुक्त ?
बेलायत सरकारले तेल खपतबारे एउटा गाइडलाइन नै तयार गरेको छ। उक्त गाइडलाइनले के भन्छ भने एक दिनमा पुरुषले ३० ग्राम र महिलाले २० ग्रामभन्दा बढी तेल खानु हुँदैन।
खाना पकाउने तेलका लागि हामीसँग थुप्रै विकल्प छन्– तोरीको तेल, सर्स्यूँको तेल, भटमासको तेल, सूर्यमुखीको तेल, जैतुनको तेल, आलसको तेल आदि। यी सबैखाले तेल हामीले भान्सामा प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं। तर, हामीमध्ये कतिपयलाई थाहा नहुन सक्छ– कुन तेल कति लाभकारी छ।
खाना पकाउन प्रयोग हुने तेल कुनै फल, बिउ, बोट वा गुदीबाट बन्छ। यसलाई पेलेर, प्रोसेसिङ गरेर खाने तेल तयार गरिन्छ।
तेलको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विशेषता के हो भने यसमा फ्याट अर्थात् चिल्लोको मात्र अत्यधिक हुन्छ।
खानको लागि कुन तेल उपयोगी हुन्छ भन्नेबारेमा समय–समयमा अध्ययन हुने गरेको छ।
केही वर्षअघिसम्म नरिवलको तेललाई स्वास्थ्यको लागि सबैभन्दा उपयुक्त मानिन्थ्यो। कतिपयले त यसलाई सुपरफुड नै घोषणा गरिदिएका थिए। तर, अमेरिकाको प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालयको एक अध्ययनले नरिवलको तेललाई ‘विष’ नै घोषणा गरिदियो।
यसको कारण के हो भने मानिसको शरीरले धेरै चिल्लो पचाउन सक्दैन। हामीले पचाउन नसकेको चिल्लो पदार्थ शरीरमै जम्मा भएर बस्छ। अनि यसले मुटुको रोग र ब्लड प्रेसरलाई निम्तो दिन्छ।
जानकारहरुका अनुसार जुन तेलमा स्याचुरेटेड फ्याटको मात्रा कम हुन्छ, त्यही स्वास्थ्यका लागि राम्रो हो। यस्तो तेल पनि निकै कम मात्रामा खान हुन्छ। पोलिअनस्याचुरेटेड फ्याट वा ओमेगा–३ वा ६ वाला तेल स्वास्थ्यका लागि लाभकारी हुन्छ। यसले रगतमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढाउँदैन र शरीरलाई चाहिले फ्याटी एसिड र भिटामिन पनि प्राप्त भइराख्छ।
एक अध्ययनले के देखाएको छ भने जैतुनको तेल (ओलिभ ओयल) को नियमित सेवनले मुटुको रोग हुनबाट ७ प्रतिशतसम्म बचाउँछ।
हार्वर्ड युनिभर्सिटीस्थित स्कुल अफ पब्लिक हेल्थकी वैज्ञानिक मार्टा गोशले २४ वर्षसम्म १ लाख मानिसमा एक अध्ययन गरेकी थिइन्। अध्ययनबाट के निष्कर्ष निस्कियो भने जसले ओलिभ ओयलको नियमति प्रयोग गरेको छ, उसलाई मुटुको रोग लाग्ने सम्भावना १५ प्रतिशत कम हुन्छ।
जैतुनको तेलको मुख्य फाइदा भनेको त्यसमा पाइने मोनोस्याचुरेटेड फ्याटी एीसड हो, जसमा भिटामिन, मिनरल्स, पोलिफेनोल्स तथा बोटबिरुवामा पाइने अन्य माइक्रोन्युट्रिएन्ट्स हुन्छ।
जैतुनको तेलमा एन्टीअक्सिडेन्ट र भिटामिनको मात्र निकै बढी हुन्छ। तर, समस्या के छ भने यो तेल कम तापमानमै तात्छ। तातेपछि यसमा पाइने कतिपय पोषक तत्व नष्ट भएर जान्छ। त्यसकारण कच्चा रुपमा नै यसको प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा, स्वास्थ्यको लागि लाभदायी नै भए पनि तेलको मात्रा भने निकै कम हुनुपर्छ। साथै तेललाई धेरै तताउनु हुँदैन। पटक–पटक एउटै तेल प्रयोग गर्नु पनि हानिकारक हुन्छ।